Vashandisi veiyo nyowani iPhone SE vanoti mafoni pamusoro peBluetooth anodimburwa uye akamonyaniswa | IPhone nhau
Vashandisi veiyo nyowani iPhone SE mushumo uyo unosheedzera pamusoro peBluetooth unogurwa uye wakatsauswa
Kana ichingova pamusika kwemavhiki mashoma, vashandisi vekutanga vari kunakidzwa neiyo nyowani iPhone SE vari kuzadza maforamu eApple ekutsigira vachiti vane zvakawanda matambudziko kana uchifona kuburikidza nemota yebluetooth system kana kuburikidza nemidziyo isina waya isina waya yeBluetooth iyo inotibvumidza isu kuti tigone uye tigamuchire mafoni.
Vazhinji vashandisi vanosimbisa izvo kurira kwacho kwakamonyaniswa kana dzimwe nguva kusanzwika apo zvese zvishandiso zviri zviviri. Zviripachena kuti dambudziko iri riri kungokanganisa mafoni kuburikidza neBluetooth uye haritadzise kutamba kwemimhanzi chero nguva. Semazuva ese, Apple haina kutaura nezvenyaya iyi.
Vazhinji vashandisi vanoti pavanenge vachitamba mimhanzi yavo yavanofarira kuburikidza neYouTube application kana kuburikidza neSpotify kana Apple Music, ruzha rwacho rwakanakisa sezvaungatarisira, asi zvinopesana zvinoitika kana tikashandisa mutauri weBluetooth kuita mafoni zvisina waya kana kana tikabatanidza kune yedu mota, uko ruzha rwunotanga kutsauswa uye nekucheka kunoramba kuripo.
Pakutanga isu tinogona kufunga kuti kudzorera kubatana kuchapedza dambudziko asi hapana chingave chiri kure kubva pachokwadi. Dambudziko iri richiripo. Kana tikadzorera maratidziro enetiweki kana kushandura SIM kadhi, dambudziko rinoramba rakafanana. Zvakare kana isu tikadzorera chishandiso sekunge chakabva kufekitori ine yazvino vhezheni yeIOS, dambudziko rinoramba richioneka. Dambudziko uye haisi mhosva yeayo chero automaker, sezvo matambudziko aya achionekwa mune dzese mota kwayakaedzwa.
Sezvo MacRumos yave ichikwanisa kuziva, dambudziko rinoratidzika kunge rinokanganisa iyo iPhone SE inomhanya iOS 9.3 kana iOS 9.3.1, (kuwedzera kune yazvino beta beta 9.3.2) zvisinei nekwanisi uye mutakuri modhi uye yaonekwa mukati United States, Australia, Canada, Germany, Switzerland uye muUnited Kingdom. Zvinoenderana neMacRumors, kunyangwe asina kutaura nezvazvo, iri diki-hombe dambudziko reiyo nyowani iPhone SE parizvino ndiyo inonyanya kukoshesa Apple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Vashandisi veiyo nyowani iPhone SE mushumo uyo unosheedzera pamusoro peBluetooth unogurwa uye wakatsauswa
Ini ndiri muridzi werombo reiyo nyowani iPhone SE, mumaonero angu ndizvo zvese zvandaida kutsiva yangu apfuura mashanu. Ini handina kuona chero matambudziko ne mota handsfree uye ini ndinoshandisa mazuva ese nekuda kwebasa rangu. Ini zvakare ndine smartwatch yakabatana panguva imwe chete uye handina kuona chero kushomeka kana kucheka pasi pechero mamiriro ekushandisa.
Pindura kuna sarpa81
Zvakanaka kuziva. Zviripachena iwo chete mamodheru akange akanganiswa ari munyika dzandataura nezvadzo muchinyorwa. Ndine mumwe wandinoshanda naye anazvo uye parizvino anga asina kana dambudziko nemota isina maoko kana achitamba mimhanzi,
Ini handina kana matambudziko nefreefree yemota yangu futi ...
Hapana dambudziko kana neBT mutauri kana BT nhare.
Zvakanaka, zvinoshanda zvakakwana kwandiri
Ini ndaive nedambudziko iro ne iPhone 6s, nekukurumidza pandakaitenga payakasvika kuSpain. Ini ndinotaura zvese zvese kuburikidza nePlantronics Legend iyo isina kumbondipa dambudziko rimwe chete ne5S uye ne6S pakanga pasina nzira yekutaura (dzimwe nguva zvaive zvakajairika asi zviitiko zvacho zvaisawanzoitika). Kunzwa kwangu kwaive kuti chiratidzo cheBT chakashaiwa simba nekuti kana ukaswededza nharembozha yako padhuze nekapepa kekunzwa kawakange wakapfeka, kupindira kwaizopera. Chinja Plantronics uye zvese zvakafanana. Zorodza zvakakwana uye hapana chinoshanduka. Mukupedzisira vakachinja yangu iPhone kune imwe kuApple mushure mekutsanangura dambudziko uye zvirinani. Iye zvino ndiyo imwe nzira yakatenderedza, dzimwe nguva inoenda zvisirizvo asi 95% yenguva iyo inoshanda zvakajairika. Panguva yandakatarisa maforamu eApple mune mimwe mitauro, kunyange kufonera rutsigiro uye pakanga pasina chiratidzo chedambudziko, ndinoona nenhau kuti ndinofanira kunge ndakave wekutanga kuzviburitsa, kunyangwe mune 6S. Iri ibasa rakakura, ini ndakanyatsofunga kuenderera ne5S nekuti kwandiri kutaura neBT chinhu chinodiwa zuva nezuva.
Pindura kune asies
Zvakanaka, foni yangu, yakatengwa muchitoro chaicho chemutengesi weApple, inokanganiswa. iPhone SE inomhanya iOS 9.3.1, uye inodaidzira yangu 92 BMW e2011 hazvinzwisisike. Chokwadi, kutenderera kwemumhanzi kunonzwika kwakakwana uye wandinopindirana naye haaone chero chinhu chinoshamisa. Ngatione kana ichigona kugadziriswa nesoftware, nekuti idambudziko guru.
Zvangu zvakakanganiswa, ini ndaedza zvese, izvozvi ndinongomirira Apple.
Apple inotipa 7 matsva eApple Watch
Matambudziko neBluetooth uye iyo nyowani iPhone SE